के हो कोरोना भाइरस ? लक्षणहरू कस्ता हुन्छन् ? — Fair Nepal
फेयर नेपाल January 24, 2020	No Comments Corona Virusकाेराेना भाइरसका लक्षणहरूकोरोना भाइरस
काठमाडौँ । चीनको वुहान प्रान्तमा पत्ता लागेको कोरोना भाइरस श्वाप्रश्वाससम्बन्धी नयाँ स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न गराउने एक प्रकारको भाइरस हो । याे भाइरस पहिलाे पटक वुहानकाे सी फुड मार्केटमा देखिएकाे थियाे । विज्ञानलाई समेत अहिलेसम्म थाहा नभएको यो भाइरसले चीनमा फोक्सोको गम्भीर प्रकारको रोग निम्त्याएको छ ।
वैज्ञानिकहरूले काेराेना भाइरसलाई २०१९–एन सीओभी नाम दिएका छन् । याे भाइरस कोरोना वर्गको नयाँ प्रजाति भएको ठानिएको छ, जुन यसअघि मानिसमा फेला परेको थिएन । सन् २००० को दशकको शुरूवाततिर संसारभरी झन्डै ८०० मानिसको ज्यान लिएको सार्स भाइरस पनि एक प्रकारको कोरोनाभाइरस नै थियो । कोरोना भाइरस जनावर र मानिसबीच सर्ने भाइरस हो । तर अहिले याे भाइरस मानिसबाट मानिसमा पनि सर्ने पुष्टि भइसकेकाे छ । मिडिया रिपाेर्ट अनुसार अहिले देखिएकाे याे काेराेना भाइरस सर्पबाट मानिसमा सरहेकाे हाे । २४ जनवरीसम्ममा यो भाइरसको संक्रमणबाट २५ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । चीन बाहेक अमेरिका, हङकङ, थाइल्याण्ड, जापान र दक्षिण कोरियामा समेत यो भाइरसको संक्रमण फैलिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
यो भाइरसको संक्रमण भएमा ज्वरो आउने, कसैकसैमा श्वास प्रश्वासमा समस्या आउने र निमोनियाको लक्षण देखिने गर्छ । यो भाइरसले फोक्सोको ठूलो भागमा संक्रमण गराई निमोनियाको विकास गर्छ । अन्य संक्रमणमा भन्दा कोरोना भाइरसमा निमोनिया गराउन सक्ने क्षमता बढी हुन्छ । जनावरबाट सर्ने भनिएको यो भाइरस अहिले मानिसबाट मानिसलाई सर्ने भनिएको छ ।
पेकिङ्ग जर्नल अफ मेडिकल भाईरोलोजीमा प्रकाशित अनुसन्धान रिपोर्ट अनुसार चीनको वुहानमा देखिएको नयाँ कोरोना भाइरस सर्पबाट मानिसमा सरेको हो ।
चिकित्सकहरुका अनुसार कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण भएपछि ज्वरो आउँछ र त्यसपछि सुख्खा खोकी लाग्छ । केही हप्तापछि सास फेर्न गाह्रो हुन्छ र केही बिरामीलाई अस्पताल लैजाने अवस्था आउँछ । तर कैयौँ अवस्थामा यस्ता लक्षण नदेखिएका बिरामीमा पनि भेटिने गरेको विज्ञहरू बताएका छन् । एडिनबरा विश्वविद्यालयका प्राध्यक मार्क वुलहाउसका अनुसार अहिले देखिएका बिरामीमा रुघाखोकीको जस्तै लक्षण देखिन्छन् र त्यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो । तर यो सङ्क्रमण सार्सको सङ्क्रमण जति गम्भीर प्रकृतिको नहुने उनको भनाइ छ ।
यो कति घातक छ ?
कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका कारण अहिलेसम्म २५ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यो भनेको जम्मा सङ्क्रमितको तीन प्रतिशत मात्रै हो । तर यो सङ्क्रमण प्राणघातक बन्न केही समय लाग्ने भएकोले ज्यान जानेको सङ्ख्या अझै बढ्ने भय व्यक्त भइरहेका छन् ।
अहिले सम्म ८३० जना सङ्क्रमित भएका विवरण प्राप्त भएका छन् । त्यसमाथि चिकित्सकहरूले थाहै नपाएको सङ्क्रमण कति छ भन्ने अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । चिनिया राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले देशका २४ प्रान्तमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको जनाएको छ । मृतकमध्ये सबैभन्दा कम आयु ४८ वर्ष र सबैभन्दा अधिक आयु ८९ वर्ष रहेकाे बताइएकाे छ। जसमध्ये अधिकांश सिरोसिस, उच्च रक्तचाप, मधुमेह र मुटुकाे राेगबाट पनि पीडित रहेकाे द गार्डियनमा प्रकाशित समाचारमा जनाइएकाे छ ।
काेराेना भाइरसकाे अहिलेसम्क कुनै उपचार छैन । कुनै औषधी, खोप वा एन्टीडोट पत्ता लागेको छैन । त्यसैले यसको संक्रमणबाट जागिनु नै एक मात्र विकल्प हो । यो नयाँ भाइरस भएकाले पनि यसको प्रभावको बारेमा धेरै कुरा पत्ता लागिसकेको छैन । वैज्ञानिकहरुले यसबारेमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । विश्वस्वास्थ्य संगठन लगायतका निकायहरु पनि लागेको बताइएको छ । कोरोना भाइरसबाट कसरी जोगिने त सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. सेरबहादुर पुनको सल्लाह यस्तो छ–
यो भाइरस पशुपंक्षीबाट मानिसमा सर्ने भएकोले सकेसम्म पशुपंक्षीबाट टाढै रहने
ब्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने
कसैले खोकेको छ भने टाढै बस्ने
सकेसम्म बढी भिडभाड हुने सार्वजनिकस्थलहरुमा नजाने, जानैपरे मास्क प्रयोग गर्ने
बाहिरबाट फर्किपछि राम्रौसँग हात मुख धुने
हातलाई घरीधरी नाक, मुख र आँखामा नलैजाने
नेपाललाई कति जोखिम
नेपालबाट चीनमा विद्यार्थी, व्यवसायी र पर्यटकको आवतजावत भइरहेने र छिमेकी देश भएकाले पनि यसको संक्रमणको जाखिम नेपालमा पनि छ । पर्यटन वर्ष २०२० मा घुम्ना आउने पर्यटकहरुको पनि सङ्ख्या बढ्दो देखिएकाले जोखिम पनि त्यही अनुपातमा रहेको डा शेरबहादुर पुन बताउनुहुन्छ । यद्यपी नेपालले त्यसका लागि केही सुरक्षा सतर्कता भने अपनाइसकेको पुनको भनाइ छ । विभिन्न निकायहरुको सहकार्यमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको हेल्थ डेस्कलाई सक्रिय बनाइएको छ । केही दिन अघि चिनबाट फकिएका विद्यार्थीमा कोरोना संक्रणको आशंका गरिए पनि प्रारम्भिक रिपोर्टमा त्यस्तो नदेखिएको बताइएको छ । बिमानस्थलमा कडाइ गरिए पनि केही सङ्ख्यमा स्थलमार्गबाट पनि नेपाल–चीन आवत जावत हुने भएकाले त्यसतर्पm पनि सतर्कता अपनाउनुपर्ने पुनको भनाइ छ ।
Previous Previous post: अग्‍नि सापकोटालाई सभामुख नबनाउन माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर
Next Next post: नेपालमा पनि फेला पर्‍यो कोरोना भाइरसको संक्रमण